11 magaalo oo ay biyo la’aani ku dhici karto mustaqbalka dhow, Muqdisho miyay ku jirtaa? (Qaybtii 1-aad) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka 11 magaalo oo ay biyo la’aani ku dhici karto mustaqbalka dhow, Muqdisho...
11 magaalo oo ay biyo la’aani ku dhici karto mustaqbalka dhow, Muqdisho miyay ku jirtaa? (Qaybtii 1-aad)
(Hadalsame) 25 Nof 2019 – Sanadkii tegey, magaalada Cape Town ayaa noqotay tii ugu horreeysey ee ay biyo la’aani ku dhacdo kaddib laba jiilaal oo is xigey.
Sahan la sameeyay 2014 ayaa muujinaya inay dhici karto arrinta qabsatay magaaladan wayn ee South Africa oo ay ilaa 500 oo magaalo ay wajihi karaan biyo yari ama la’aan 25% ah.
Waxaa jirta saadaal ah in baahida biyo nadiif ihi ay 40% ka sara mari doonto dalabka jira marka la gaaro 2030, taasoo ay ugu wacan tahay cimilada is bedeleeysa, dadka sii badanaya iyo hab-dhaqanka insaanka ee aan degaanka caawinayn.
Halkan waxaannu idiinkugu haynaa 11 magaalo oo dunida ku filiqsan oo ay biyo la’aani ku dhici karto mustaqbalka, sida ay sheegtay warbixin lagu qoray BBC.
São Paulo, waa magaalada ugu dadka badan Brazil waxayna ka mid ah 10-ka magaalo ee guud ahaan ugu dadka badan dunida. 2015 wuxuu kaydka biyeheedu hoos u dhacay 4%, taasoo keentay in ay 20 milyan oo qofi ay bishii helaan biyo ku filan 20 maalmood oo qura.
Horumarka iyo fiditaanka magaaladan oo ku taalla koonfurta Hindiya, laguna naanayso ”Caasimadda Tiknolojiyadda” ayaa keentay in maamulka degaan ee halkaa ka jiraa uu ku dhibtoodo in dadka la siiyo biyo iyo faya-dhowr ku filan. Waxaa dheer in hannaanka daxalaystey ee bilaa dayactirka ah ee biyaha siiya magaaladani uu dusiyo 50% biyihii magaalada loogu tala galay. Laagaha magaalada ayaa iyaguna 85% dikhoobey oo aan cabitaan ku samayn.
Sida uu sheegay World Bank, biya yarida magaaladani waxay qofkiiba sanadkii siinaysaa wax ka yar 1,000 mitir oo 3 jibbaaran. Yeelkeede, deganayaasha Beijing oo 20 milyan ahi waxay ku noolaayeen 145 mitir oo 3 jibbaaran oo biyo ah 2014-kii. Waxaa sidoo kale dikhaysan biyaha magaalada oo 40% aan xitaa loo isticmaali karin in beeraha lagu waraabiyo, cabis haba joogtee.
Guud ahaan Shiinaha oo dunida ka ah 20%, wuxuu biyo nadiif ah ka haystaa wax ka yar 7%, iyadoo ay sahan ay samaysay Columbia university lagu sheegay in kaydka biyaha nadiifka ah ee Shiinuhu ay 13% intii u dhaxaysey 2000 ilaa 2009.
Qaahira, sawirka: Wikipedia
Webiga Niilka, oo ah halbowlaha ilbaxnimada Masar tan iyo casrigii dhaxaga, wuxuu wajahayaa halis cusub. Waa isha laga helo 97% biyaha dalkan haddii kale ahaan saxare 100% ah, balse wuu sii yaraanayaa.
Hay’adda caafimaadka adduunka QM ee WHO ayaa saadinaysa in biyaha magaaladani ay aad hoos ugu dhici karaan sanadka 2025, iyadoo ay sidoo kale biyuhu aad u wasakhaysan yihiin oo aan la wada dawayn.
Previous articleMadaxtooyada ma lug baa u aasan dhanka Doorashada Madaxtinnimada 2020?
Next articleIsku aadka tartanka Bariga & Bartamaha oo la sameeyay (Guruubka ay Somalia gashay?)